MINISTERAN’NY FANDAMINANA SY FANENTANANA - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Renouveau charismatique catholique de Madagascar
Ny fihavaozana karismatika
Teny Mpandrindra Nasionaly
Sata mifehy ny vondrombavaka
Fandaminana sy fanentanana
Fifandraisana sy serasera
Tselatry ny Fanahy Masina
Home »MINISTERAN’NY FANDAMINANA SY FANENTANANA
MINISTERAN’NY FANDAMINANA SY FANENTANANA
Ny Andriamanitra inoantsika dia Andriamanitry ny fiadanana, Andriamanitry ny filaminana sy ny hatsarana. Noho izany, izay rehetra ataontsika amin’ny fiaraha-miasa amin’Izy Andriamanitra dia tokony hifanaraka sy ho taratra amin’ireo toetran’Andriamanitra ireo. Amin’ny maha-olombelona vatana, saina ary Fanahy dia tokony ho mendrika isika na anaty na ivelany amin’ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra. Noho izany, dia mila fiomanana sy fanampiana isika amin’izany fihaonana sy fifandraisana amin’Andriamanitra izany.
Amin’ny ankapobeny, dia ny fanampiana ny olona hifandray misimisy kokoa amin’Andriamanitra no anjara asan’ny ministeran’ny fandaminana sy fanentanana. Noho izany, dia mila olona manana izany fanomezam-pahasoavana izany ny fikambanantsika karismatika mba hanampy antsika sy hanohana antsika mba hahavitantsika ny iraka ampanaovina antsika.
1)- Araka ny anarana omena azy, dia mizara roa lehibe ity ministera ity. Tsy mifanalavitra nefa ireo fizarana ireo fa mifameno sy mifampitohy ihany. Andeha hojerentsika aloha ny amin’ny fandaminana. Ny tenin’Andriamanitra ifotoran’ity ministera ity sady manentana antsika dia ny asan’ny apôstôly toko faha-6, and 1-6. Raha nahatsapa ireo apôstôly fa difotry ny adidy sy ny andraikitra ara-nofo loatra, ka lasa tsy zarizary ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra, dia nifidy diakra fito (7) mirahalahy hanampy azy. Izany hoe hain’ireto apôstôly ireto ny nandanjalanja ny tena zavatra sy ny ambinambin-javatra. Noho izany, dia anjaran’ny ministeran’ny fandaminana ny mijery hoe inona aloha no maika sy manan-danja kokoa. Tsy mandeha ho azy nefa izany fametrahana ny laharam-pahamehana izany, fa tsy maintsy hananana ny fahaiza-mitantana. Noho izany, izay ao anatin’ity ministera ity dia tsy maintsy mahay mandanjalanja sy mahay mandray fanapahan-kevitra matotra. Maro ny zavatra tsy maintsy hahitsy sy andraisana izany fanapahan-kevitra izany. Rehefa mandray fanapahan-kevitra nefa dia tsy maintsy vonona hizaka ny vokany ihany koa. Noho izany ny mpiandry ondry na ny mpitarika sasantsasany dia tsy maintsy mangataka ny Fanahy Masina mba hananany ny fanomezam-pahasoavana na karisma hahay mijery izay laharam-pahamehana sy ny fahaiza-mitantana.
Amin’ny alalan’ny ohatra nomen’ireo apôstôly tamin’ny fitantanana ny kristianina tany am-piandohana, dia mazava ho antsika ankehitriny koa fa ny vavaka, ny fanompoana an’Andriamanitra, ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra no laharam-pahamehana ho an’ny vondrona na sokajy manokan-tena ho an’Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ambiny dia entina hanatsarana ireo laharam-pahamehana voalaza etsy ambony. Noho izany, mba hahafahana mivavaka, manompo tsara an’Andriamanitra ary mitory ny tenin’Andriamanitra, dia tsy maintsy atao ny fandrindrana ireo andraikitra hafa. Ity misy ohatra sady zava-misy ato anatin’ny Fiangonana : misy ireo fikambanan-drelijiozy manokan-tena tanteraka amin’ny fibanjinana an’Andriamanitra. Vitan’izy ireo izany satria hainy ny mandrindra ny asa aman-draharaha ataony. Misy manko amin’izy ireo miandraikitra fotsiny ny ara-materialy sy ny raharaha hafa.
Noho izany ity karisman’ny fandaminana ity, dia mila fandavan-tena hanompo ny hafa. Fanompoana ny hafa mitaky fahafoizan-tena tanteraka mba ahafahan’ireo hafa ireo tena mifantoka amin’ny fanompoana an’Andriamanitra, mifantoka tanteraka amin’ny fiderana sy fitsaohana azy Andriamanitra anatin’ny vavaka lalina sy fahatoniana tanteraka.
Ity ministera ity dia tokony hiasa tsara ary tena hiasa rehefa misy kongresy, fivoriana, fiofanana, fiatahana masina, laretirety na androm-bavaka. Ny dikan’izany, ny olona miditra ato anatin’ity ministera ity dia tsy maintsy olona mahay miara-miasa aman’olona fa tsy olona miolonolona, olona mahay mifandray amin’ny hafa sy vonona mandray ny hafa. Raha tsorina dia tsy maintsy manana saina mahay miara-monina aman’olona ny olona ato anatin’ity ministera ity.
Tokony hataontsika ao an-tsaina mandrakariva fa ny fanompoantsika ny hafa, ny hery lanintsika ho an’ny hafa dia tsy very maina tsy akory. Tokony ho ao an-tsaintsika mandrakariva ny tenin’izy Tompo manao hoe : « Isaky ny nanao izany tamin’ny anankiray amin’ireto zandriko kely indrindra ireto ianareo, dia nanao izany tamiko. » (Mt 25, 40). Ny olona ato anatin’ity ministera ity dia olona voaantso mba haneho fitiavana ny hafa, noho izany, tsy maintsy olona be fitiavana.
Ny asan’ny ministeran’ny fandaminana dia tsy voafaritra fotsiny amin’ny hoe :
Fanomanana ny trano handraisana ny olona ;
Fanomanana sakafo ;
Fandaminana ny fiara na ny dia hataon’ny olona;
Fanomanana ny toeram-pivavahana ;
Fandraisana ny olona sy ny resaka vola…
Eny, ekena fa isan’ny andraikitry ny ministeran’ny fandaminana ireo fa anjarany ihany koa ny mandamina ny fandaharam-potoan’ny fivoriana, ny fihatahana masina na ny fiofanana. Ny fahaizana mandrindra sy mandamina ny fandaharam-potoana dia efa manentana ny fivoriana sy ny vavaka na ny fiofanana na ny fivoriana.
Azontsika alaina ohatra ny laretirety maro izay efa nataontsika nandritra ny taona maro. Azo lazaina fa isaky ny laretirety nataontsika dia nakana lesona ho amin’ny tsaratsara kokoa hatrany. Ohatra tamin’ireny ny hoe : nanao ahoana ny fomba nandraisana olona an-jatony mangataka vavaka fanasitranana ? Misy ny natao miaraka, misy ny natao tsirairay. Ohatra ihany koa hoe manoloana ny zava-misy dia firy ny gropy natsangana hitondra am-bavaka ? Nanao ahoana ny fandaminana ny trano fivavahana ho an’ny olona ? Nanao ahoana ny ravaka (sary, labozia, lakroa) ? Tsapa tamin’ireny fa ny ministeran’ny fandaminana dia nanampy ny ministeran’ny fanasitranana.
2) Ny endrika faharoa amin’ity ministera ity dia ny fanentanana. Inona no atao hoe manentana ? Ho an’ny vondrona karismatika, ny tanjon’ny fanentanana dia ny hampisondrotra ny fanahin’ny olona ho any amin’Andriamanitra :
Mitantana azy ireo ;
Mamohafoha azy ireo ;
Mampifantoka azy amin’ny fivavahana.
Ny fanentanana dia toy ny lakan-drano iampitan’ny tenin’Andriamanitra hanetsaka ny fon’ny olona tsirairay avy. Tsy dia misy tanjona ngeza be ny fanentanana fa manampy olona hivavaka. Noho izany ny mpanentana dia tsy maintsy olona mahay manampy ny olona hifantoka bebe kokoa amin’Andriamanitra.
Ny olombelona dia vatana, saina, fanahy, noho izany anjaran’ny mpanentana ny manampy ny olona hahay hampifandrindra ireo maha-olona azy ireo mba ho vonona hiasan’ny fanahin’Andriamanitra.
Noho izany dia anjaran’ny mpanentana ny mitady ny fomba mba hahaizan’ny olona iray mandrindra ny momba azy sy mamohafoha azy :
Ny fijeriny ;
Ny fandrenesany ;
Ny fihetseham-pony ;
Ny vatany ;
Ny fihetsiny ;
Ny fanahiny sy ny saina.
Inona avy ireo fomba sy fitaovana eo an-tanantsika mba hamohafoha ny olona ka hitarihana azy ho eo amin’Andriamanitra ?
Ny teny: misy ny teny mandratra ka mampihemotra ny olona, ny tanjontsika nefa dia ny hitondra ny olona ho eo amin’Andriamanitra ka ireto no tokony tanjona kendrena raha miteny :
Ny teny raha tsara rafitra dia toy ny vavaka tsilovin’ny Fanahy ka manentana mikasika ny fon’ny olona ;
Ny teny azo raisina ho toy ny toriteny voalanjalanja ka mampahazo aina ny vondrona iray manontolo ;
Ny teny dia manazava ary koa mandrisika ny olona hanantona an’Andriamanitra.
Misy ny fotoana hitenenana ary misy koa ny fotoana hanginana, satria ao anatin’ny fahanginana dia afaka mandray ny bitsik’Andriamanitra isika, mandray ny fahasoavana avy aminy ary koa mihaino ny sitrapony amintsika. Tsy misy fiainam-panahy sy vavaka lalina sy mahomby raha tsy haintsika ny manaja ny fahanginana.
Tsy maintsy ataon’ny mpanentana ny mitady hira manampy ny olona hitodika misimisy kokoa amin’Andriamanitra. Betsaka ny hira, kanefa misy ireo tonga dia mikasika ny fanahin’ny olona. Ny hira izay hampifambiasina dia tokony ho vokatry ny Fanahy mba hampandroso kokoa ny olona amin’ny firaiketana amin’Andriamanitra sy hampiditra azy amin’ny vavaka lalina. Noho izany dia tsy maintsy angatahin’ny mpanentana ny Fanahy Masina mba ahafahany misafidy ireo hira manentana ny olona sy mampivavaka azy ireo. Tsy maintsy atao tsara ny safidin’ny hira ary mifanaraka amin’ny fotoana tokony hanaovana azy. Noho izany dia tsy ny olona rehetra no afaka manentana fa izay manana ny karisma ho amin’izany ihany.
Davida mpanjaka dia nandihy tamin’ny fiderany an’Andriamanitra. Ny dihin’i Davida no tokony ho fakan-tahaka ho antsika amin’ny fiderana an’Andriamanitra rehefa mivavaka isika. Tsy maintsy haintsika ny manavaka ny dihy masina sy ny dihin’izao tontolo izao. Anjarantsika sy ny Fiangonana ny mandanjalanja ny hoe inona ny dihy azo atao amin’ny vavaka sy ny tsy azo atao. Tsy maintsy jerentsika na mifanaraka amin’ny fiderana an’Andriamanitra izany dihy izany na tsia. Anjaran’ny mpanentana ny mijery izany. Raha ohatra ka mandritra ny vavaka dia mandihy foana dia tsy ao izay ny fandanjalanjana. Ny fandihizana dia fotoana mandalo sy fohy ihany fa tsy hoe tanjona akory ny hoe hampandihy ny olona.
Maro ny fihetsika mahasolo ny teny ary manampy ny olona hivavaka. Misy fotoana mipetraka, mitsangana, miondrika, miankohoka, mitehaka, manandra-tanana. Ny tanjona amin’ny fihetsika atao dia ny hampisehoantsika izay tena ao anatin’ny fontsika ao fa tsy fiatsaram-belatsihy akory sanatria.
Ny feon-kira na mozika dia tokony hampisondrotra ny fanahin’ny olona amin’Andriamanitra. Ny mozika dia tokony hanampy ny olona hivavaka. Toy ny hira teo aloha ihany dia ilaina ary tsy maintsy atao ny fandanjalanjana ny feon-kira na mozika alefa na atao mba hampiditra ny daholobe ao anatin’ny tontolon’ny fanahy.
Raha ireo zavatra ireo no jerentsika dia tontolo mivelatra be sady sarotra nefa harena ny fanentanana. Tsikelikely isika dia hahita endrika hafa ihany koa amin’ity fanentanana ity ato anatin’ny vondrona karismatika iainantsika. Kanefa tiako asiana tsindrim-peo amin’ity tapany voalohany ity fa ny LITORJIA dia ao anatin’ny ministeran’ny fanentanana ihany koa. Ao anatin’ny litorjia dia maro ny karismatika tonga dia mahita ny anjara toerany ary tsy am-pihambahambana no anaovany izany.
Ny fanentanana litorjika dia asa tena masina sy manan-danja tokoa. Noho izany dia mila fitandremana manokana mba ho tsara. Ny fomba famakiana ny tenin’Andriamanitra, ny fisafidianana ny hira, ny fihetsika, ny mozika, ny fanentanana ary ny ravaka dia mila fitandremana fatratra sy karisma ary ny Fanahy Masina.
Ao anatin’ny litorjia dia misy mahita ny anjara toerany manokana ka mahatonga ny antoko mpihira. Koa amporisihina ary isika mba hampivelatra izany talenta omen’Andriamanitra antsika izany. Indrindra ho antsika tanora, atsangano ny antoko mpihira karismatika satria izany dia sady antso no iraka ho antsika.
Amin’izao dia ajanontsika eto aloha ny famelabelarana fa mandrisika antsika ampian’ny herin’ny Fanahy Masina mba hiezaka amin’ity ministeran’ny fandaminana sy ny fanentanana ity mba handroso ny iraka ampanaovina antsika ato anatin’ny vondrom-bavaka karismatika misy antsika.
Mopera Jacques Z. GRAD, SVD
Aomonie Nasionaly Karismatika